တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ - အပိုင်း (၅)	15 Feb, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 23:47 )
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် - အပိုင်း (၂)	13 Feb, 13	သွေးစကား	- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	???????????????????????? ?????????????? ?????????? ??????????????????
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် - အပိုင်း (၁)	12 Feb, 13	သွေးစကား	- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	?????????????????? ???????? ???????????????????????? ???? ??????? ??????????????
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၅)	10 Feb, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ယာဉ်တင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစက် အမြောက်ပုံ (ပေးပိုသူ - ပြည်တွင်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ လေတပ်အရာရှိ တစ်ဦး)
တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ - အပိုင်း (၄)	08 Feb, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ??????(??)???????? F-16 ???????? ???????????
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 23:48 )
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှစ် (၆၀) ခရီး - အပိုင်း (၃)	05 Feb, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- မူဝါဒ	??????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?????????????
Last Updated ( Tuesday, 29 January 2013 23:49 )
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၄)	03 Feb, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	??????????????????? F - 16 ?????????? ????????????????????? ??????????
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 15:43 )
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားဝင်း အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရ - အပိုင်း (၂)	01 Feb, 13	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းအတွင်း တရား ဟောပြောမှုအား အားပေး နားထောင်နေတဲ့ မန္တလေးမြို့ သံဃာတော် ပြည်သူလူထူများ
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားဝင်း အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တရ - အပိုင်း (၁)	29 Jan, 13	သွေးစကား	- ကိုယ်တွေ့	??????????? ?????????????????? ????????????
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၃)
တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ - အပိုင်း (၃)
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှစ် (၆၀) ခရီး - အပိုင်း (၂)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၂)
တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ - အပိုင်း (၂)
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှစ် (၆၀) ခရီး - အပိုင်း (၁)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁)
တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ - အပိုင်း (၁)
Page6of 41	« Start Prev 1234567 8910 Next End »	ပြည်ထဲရေးရဲ့ ဗရမ်းဗတာကြောင့် အစိုးရထိုင်ခုံ လှုပ်နေရ
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ကာလမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို အစိုးရက တစိုက်မတ်မတ် လုပ်နေပေမဲ့ ပြည်ထဲရေးရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံကြောင့် ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်နေရလို့... အပြည့်အစုံသို့	မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - အပိုင်း (၉)
Thursday, 13 June 2013 21:01
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ပိုစတာ
တပ်မတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ တပ်မတော် အရာရှိတချို့နဲ့ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား အဖွဲ့တို့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ခဲ့ပုံတွေကို ဆက်လက် တင်ပြ သွားပါမယ်။ အပြည့်အစုံသို့	မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - အပိုင်း (၈)
Monday, 10 June 2013 23:42
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကွပ်ကဲမှုအောက် မြဝတီ ကိုယ်ပွား သတင်း စာတိုက်၌ သတင်းစာ ပုံနှိပ်စက် လည်ပတ်မှု အခြေ အနေအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးစဉ်။
တပ်မတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ တပ်မတော် အရာရှိ.. အပြည့်အစုံသို့	မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - အပိုင်း (၇)
ဦးပိုင်မှ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲနေတဲ့ မြဝတီဘဏ် လီမီတက်
ဒီနေ့ မှာတော့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေး အခြေခံပေါ် မူတည်ပြီး Sanction လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ လုပ်သင့်ပြီး အကျိုး ရှိ မရှိ... အပြည့်အစုံသို့	မငြိမ်းချမ်းသေးသော အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်
မကြာသေးမှီ ကလေးကမှ KIO နှင့် အစိုးရတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို မြစ်ကြီးနားမှာ ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ရာ သဘောတူညီချက် (၇) ချက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံသို့	စစ်တပ် ဆိုင်ရာ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ များအား [email protected] သို့ ဆက်သွယ် ပို့ပေးကြပါ။	လက်ရှိ www.photayokeking.org အား ၀င်လို့ မရပါက
We have 47 guests online	နောက်ဆုံးရသတင်းများ